Tattoo yeuroboro, shanduko yekusingaperi | Kunyora
Tattoo yeuroboro, shanduko yekusingaperi
Zvimwe iyo tattoo yeuroboro hazvizivikanwe kwauri, asi kana tikataura nezvechifananidzo chayo, dhiragoni kana nyoka ichidya muswe wayo, zvirokwazvo zvinonzwika zvakanyanya kujairika kwauri.
Ipapo tichaona izvo iyo ma tatoo na uroboro, mucherechedzo wekare wekuvandudza yakakwana kune avo vanotenda kuti hupenyu inzira yekuchinja.
1 Chiratidzo chemashiripiti chekuvandudzwa
2 Iyo imwecheteyo chiratidzo chenyika yose
Chiratidzo chemashiripiti chekuvandudzwa
Tattoo yaUroboro yakavakirwa pamufananidzo une midzi muIjipita yekare (Chitarisiko chayo chekutanga chakanyorwa muguva raTutankhamun) uye chakazosvika nyika yekumadokero kuburikidza netsika dzechiGreek. Izwi uroboro, muchokwadi, rinobva muchiGiriki, uye rinogona kuturikirwa sezvazviri chaizvo, 'idya muswe wako wega'.
Icho chiratidzo cheiyo uroboro yakapfuma uye yakawanda-yakaturikidzana, kunyangwe, zvakadzika pasi, inowanzo nguva dzose inoreva kutenderera kwehupenyu. Kune avo vanozvibatanidza nehusingaperi kutenderera kwekuvandudzwa uko kunosanganisira kuzvarwa, kurarama, kufa uye kutanga patsva. Kune rimwe divi, muswe wenyoka unobatanidzwa nechiratidzo chechipenga, nepo muromo unomiririra chibereko muchirevo chekuzvarwa.
Iyo imwecheteyo chiratidzo chenyika yose
Iyo uroboro tattoo ine zvirevo zvakafanana mune dzimwe tsika kutenderera pasirese. Kune maGreek, semuenzaniso, yaive zvakare yakabatana nepfungwa yekumutsiridzwa, nekuti ichi chiratidzo chaive chakabatana nezvakasikwa zviitiko, iyo inosvika pakakwirira kumira uye kutanga pamusoro (semadutu, semuenzaniso).
Kune rumwe rutivi, Yaive zvakare yakakosha chiratidzo kune masayendisiti, sezvo iyo uroboro isina kungomiririra zvese zvinhu mune imwe, yaive zvakare inomiririra huviri., nenzira yakafanana neiyo ye yang uye yang, iyo iyo inogovana zvakafanana kujeka.
Isu tinovimba kuti ichi chinyorwa pane zvinoreva tattoo yeuroboro chakanakidza iwe. Tiudze kana iwe uine tattoo yakadai mune zvakataurwa!
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kunyora » Mhando dzematatoo » Kufungidzira Tattoos » Tattoo yeuroboro, shanduko yekusingaperi